2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #365 by Mathew3120
ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေဟာ addons.Will အဘို့သင့် installers ကို update တဲ့အခါမှာအဟောင်း installers နေဆဲ addons ကို download လုပ်နိုင်တော့မည်သို့မဟုတ်ငါအသစ်က installer ကိုအတူပြန် addon ကို download လုပ်ပါဖို့ရှိသည်ပါဘူး, installer ကို ပတ်သက်. မေးခွန်းမေးစရာချင်တယ်။
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #366 by rikoooo
, Mathew မင်္ဂလာပါ
သငျသညျ installer ကိုဗားရှင်း3ကနေ start အသစ် installers နောက်ဆုံးပေါ် P10D နှင့် FSX ရေနွေးငွေ့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, ထပ် addon ကို download လုပ်ရပေမည်။
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #374 by rufgar
မင်္ဂလာပါ။ ငါမကြာသေးမီကသင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်နှင့်ကို default လိုက်တဲ့ destination ဖိုင်တွဲထဲကနေ pilatus PC-9 fsx နှင့်မ fsx-ရေနွေးငွေ့ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်။ ငါကူးယူခြင်းနှင့် fsx-ရေနွေးငွေ့မှ paste လုပ်ထားတဲ့ကြောင့် gauge မှလွဲ. ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီအတှကျ patch ကိုလည်းမရှိဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုထပ်ဒေါင်းလုတ်ရန်ရှိတယ်သလဲ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #376 by Gh0stRider203
rufgar wrote: မင်္ဂလာပါ။ ငါမကြာသေးမီကသင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်နှင့်ကို default လိုက်တဲ့ destination ဖိုင်တွဲထဲကနေ pilatus PC-9 fsx နှင့်မ fsx-ရေနွေးငွေ့ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်။ ငါကူးယူခြင်းနှင့် fsx-ရေနွေးငွေ့မှ paste လုပ်ထားတဲ့ကြောင့် gauge မှလွဲ. ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီအတှကျ patch ကိုလည်းမရှိဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုထပ်ဒေါင်းလုတ်ရန်ရှိတယ်သလဲ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါ gauge မတပ်ဆင်ခဲ့သလဲ, သငျသညျအဘယျသို့ပြောနေနေသလဲ? ရုံဘာတစ်ခုမှငါပစ္စည်းပစ္စယအကြံပြုခြင်းခင်သေချာကျနော်တို့အတူတူစာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်အောင်
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: rufgar
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #377 by rufgar
ဟုတ်ကဲ့ cockpit အဲဒီမှာရှိပါတယ်ဒါပေမယ့် gauge အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #378 by Gh0stRider203
ok hmmm ။
ငါကရေနွေးငွေ့ထက်ကွဲပြားခြားနားသော directory ထဲတွင် install လုပ်ထားခြင်းနေချိန်မှာကျွန်မနားလည်သောအရာကိုအနေဖြင့်, ရွှေ Edition ကိုပြေးတယ်အနေဖြင့်ကောင်းစွာ, MY နားလည်မှုငါ 'ပါလျှင် (ငါ့ကိုပြင်ပေးပါသင်ရေနွေးငွေ့အတွက် FSX directory ကိုရပြီးတာနဲ့အရာအားလုံးတူညီဖြစ်ပါတယ် မီတာမှားယွင်းတဲ့) ။
သင်ရုံထို့နောက်ရုံသငျ့လျြောသောဖိုလ်ဒါမှအရာအားလုံးကိုရွှေ့, သာမန်နဲ့တူပါက install လုပ်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ငါသည်ဤသင်ပြုလေ၏ကားအဘယ်သို့ခန့်မှန်းတယ်?
သငျသညျဘုရားသခငျသညျအစဉ်အမြဲငါရရန်ရှိသည်ဆိုပါကဂုဏ်နငါ lmao ရှိလူအပေါင်းတို့သည် ... ahhh ပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့သင်သည်အဘယ်အရာကိုသိအဟမ်းအတွက် ROYAL နာကျင်မှုဖြစ်ရဲ့သိတယ်အရမ်းရယ်ရတယ်ငါ FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူးပါဘူးအရမ်းရယ်ရတယ်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ငါအရမ်းရယ်ရတယ် .... FSX folder ကိုသာ erm 67.2 အရင်ဖျော်ဖြေဖြစ်ပါတယ် mean..My
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #379 by rufgar
ဒါဟာ fsx-ရေနွေးငွေ့ကိုတိုက်ရိုက်မတပ်ဆင်နိုင်ပါ။ fsx ကနေကူးယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကသူတို့ကိုအလုပ်လုပ်ဘို့သီးခြား gauge config ကိုဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ fsx မှငါ့ gauge အဘယ်သူအားမျှရေနွေးငွေ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #380 by rufgar
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #381 by Gh0stRider203
(အနည်းဆုံးသီအိုရီအတွက်) သင့်ရေနွေးငွေ့ဗားရှင်းအတွက် gauge ဖိုင်တွဲရှိ ....
Lemme အချို့သောသူငယ်ချင်းများကိုင်ရ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ငါ့ကိုထက်ပိုကောင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်
2 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #382 by rufgar